I-QUARTZ SHOWER WALLS PROS KUNYE NE-CONS - UYILO LWEGUMBI LOKUHLAMBELA
Eyona uyilo Lwegumbi Lokuhlambela I-Quartz Shower Walls Pros kunye ne-Cons
Nasi isikhokelo sethu kwiindonga zeshawari zewartz eziluncedo kunye neengozi kubandakanya ukuba zikwimeko enjani ukuzinza, ukugcinwa kunye noyilo. Ukuba ulungele ukuhlaziya okanye ukulungisa ikhaya lakho, uyilo lwangaphakathi ngoku lubandakanya ukusebenzisa izinto zesiko kuseto olungelolwesiqhelo.
I-Quartz, ilitye eliqinileyo, eliqinileyo, elihambelana nokunxibelelana nekhitshi; Nangona kunjalo, i-quartz ifumana ukuthandwa okusetyenziswa kwiindawo zokuhlambela iikhawuntari, i-flooring, iibhentshi kunye nodonga lweeshawari. Iindonga zeeshawari zeQuartz ziyamangalisa kwaye zinika uyilo olungenamda kunye nokukhethwa kombala.
Ishawa yindawo ebalulekileyo esebenzayo kwigumbi lokuhlambela kwaye ibandakanya indawo yokuhlambela evalelweyo, ishawari kunye nebhafu yokuhlambela, okanye indawo yokuhlambela kwigumbi elimanzi.
Ngaphandle kokusebenza, ishawa yongeza kwisitayile sokuhlambela kunye nokuhonjiswa. Ukusebenzisa i-quartz kwiindonga zeshawari kunika ukuzinza kunye nethuba lokudala indawo yokugxila kwindawo yokuhlambela.
I-Quartz yenza udonga oluqinileyo lokuhlamba kwaye ayinayo i-seams efana nokuthayipha. Yomelele kunelitye lendalo kwaye ayisiyonto ingena ngaphandle, enobunjineli kodwa ifuna ulondolozo oluncinci.
Kwesi sikhokelo sokugqibela kwiindonga zeshawari zewartz ezilungileyo nezingalunganga, uya kufumana ulwazi lokukunceda uthathe isigqibo sokuba usebenzisa i-quartz yakho ishawa yangasese Iindonga ziyahambelana neemfuno zoyilo lwakho lokuhlambela.
Yintoni iiQuartz Shower Walls?
I-Quartz Shower Walls Pros
I-Quartz Shower Walls Cons
Ngaba iQuartz ilungile kwiNdonga zokuhlamba?
Ngaba iQuartz ilungile kwigumbi lokuhlambela?
Yeyiphi eyona nto ifanelekileyo yokuSebenzisa iiShower Walls?
Iindonga zokuhlamba ezenziwe nge-quartz zenziwe kwiimakhishithi ezi-¼ kunye ne-½ intshi. Ubuncinci be-slimmer bunceda amaphepha ukuba afakwe ngokulula xa kuthelekiswa namatye amaninzi e-quarts njenge-countertop.
Ngokusebenzisa i-quartz kwiindonga zeshawari, akukho zihlanganisi kwi-caulk okanye kubangele ukuvuza. Iiphaneli zeshawari zeQuartz zikhangeleka zinobunewunewu kwaye zibonelela ukuhlala ixesha elide kuthintela ukulungiswa kunye nokususwa.
Ukhetho lwe-quartz lubandakanya ukudityaniswa kwemibala emininzi, iipateni, ukuprinta, kunye nokubandakanya ii-slabs ezenziwe ukulingisa ukubonakala kwamatye ahlukeneyo endalo kunye nolunye ulwakhiwo.
Nangona i-quartz yenziwe, yenziwe malunga ne-93% ye-quartz yendalo kunye ne-7% ye-resin kunye ne-pigment.
Ukudibanisa lo mlinganiselo we-quartz kunye nezinto ezenziwe ngabantu zenza iimveliso ze-quartz ezinjengeendonga zeshawari zenziwe ngokwezifiso kakhulu. Apha ngezantsi kukho ubuchule beendonga zeshawari yequartz.
Ukuzinza -I-Quartz inendawo engatshiyo ethintela iintsholongwane kunye neebhaktiriya ekungeneni kumphezulu, kwaye ukugqitywa kukumelana namanzi.
I-Quartz iyamelana nokuqhekeka kunye nokophuka, kwaye ukuba igcinwe kakuhle, umphezulu wodonga weshawari unokuhlala ubomi bonke.
Isondlo esisezantsi - Iindonga zeshawari yeQuartz kulula ukuzigcina zicocekile. Sula ngokulula iindonga zeshawari ye-quartz ngelaphu elimanzi kunye nokucoca okungagungqiyo.
ifestile yokuhlala yebhentshi
Ukuqaqamba okungaphezulu okanye ukususa nabuphi na ubuzaza kumabala emanzi, sebenzisa umxube weviniga kunye namanzi atshiziweyo kunye nokusula ngomile ngelaphu elicocekileyo nelomileyo. Isicoci seglasi sisebenza kakuhle.
Iinketho ezininzi zoyilo Njengoko kukhankanyiwe, i-quartz yenziwe ngumntu, kwaye inkqubo yokuvelisa ivumela ii-pigment ezahlukeneyo kunye neepateni ukuba zilingise elinye ilitye lendalo elinjengemabhile enombala owenziwe kakuhle.
I-Quartz nayo inokwenziwa ukuba ibonakale njengesikhumba, igrabile, okanye naliphi na ilaphu, into yendalo, okanye uyilo lobugcisa olifunayo kwindlu yakho yangasese.
Uyilo olumangalisayo Iipaneli zodonga lweQuartz zodonga zenza ukubukeka okuthe tye, okunobunkunkqele, kunye nokujonga okuncinci kunye nokuziva ngathi kukuhlamba kwihotele eneenkwenkwezi ezintlanu.
Iindonga zeeshawari zewartz zifunwa kakhulu kwaye zibonelela ngenkangeleko yangoku. Kulula ukugcina nokuhlala ixesha elide. Nangona kunjalo, i-quartz inezinto ezimbalwa zokuthatha ingqalelo.
Ubunzima -Ubunzima be-quartz slabs budlula izinto zodonga lokuhlambela zemveli ezinjengethayile kunye nefayibha yeglasi. Kubalulekile ukujonga imigangatho yomgangatho kunye nobunzima apho i-slabs iya kufakwa khona.
Abahlambululi beMichiza - Ukucoca okusetyenzisiweyo kwi-quartz akunakwenziwa ngesiqulatho seasidi ephezulu okanye kwizithako zealkali. Ezi khemikhali zinokonakalisa umphezulu wodonga lwe-quartz.
Iindleko zokuFaka - Ukubeka i-quartz phantsi okanye ukuyisebenzisa kwi-countertops yokuhlambela yinkqubo elula yokufakela.
Nangona kunjalo, ukufaka i-quartz slabs emi nkqo kwishawari kunzima ngakumbi kwaye kufuna izixhobo ezongezelelekileyo kunye nesifakeli esingaphezulu kwesinye. Oku kwenza ukuba iindonga zeshawari zewartz zibize kakhulu ukuyifaka.
iikhabhathi ezipeyintwe ngezinto zakudala
Iindonga zokuhlamba kufuneka zigutyungelwe zizinto ezingangeni manzi ezingayi kuqhekeka okanye ukuvuza. Amanzi angena emva kodonga lweshawari aya kubangela ukubola nokubumba.
I-Quartz yenza izinto ezibalaseleyo kwiindonga zeshawari ngenxa yomphezulu ongatshiyo, ukumelana kwamanzi, ukuthotywa okuphantsi, kunye nokugcinwa ngokulula.
Amagumbi okuhlambela adla ngokwenziwa njengendawo yokubuyela ngasese ngaphakathi kwigumbi lokulala elinamagumbi aphezulu. I-Quartz yinto ebalaseleyo kuyo nayiphi na indawo yokuhlambela enikezela uyilo lwangoku lokuhlaziya igumbi lokuhlambela ngokwesiko.
Amacwecwe enziwe nge-quartz yobunjineli lukhetho olukhulu kwigumbi lokuhlambela, iindonga zeshawari, imigangatho yeshawari, iibhentshi zebhafu, imiphezulu yeetafile, kunye nebhafu okanye ibhafu yeJacuzzi ejikelezileyo.
Ukunganyanzeleki emanzini, i-quartz lukhetho olufanelekileyo kwindawo yokuhlambela, kwaye xa usebenzisa ii-quartz slabs, ukuqhubeka kokubonelela kunika igumbi lokuhlambela indawo ecocekileyo.
Akuyi kubakho iithayile kunye negrout yokuphula uyilo lwe-quartz. I-Quartz iyakuphakama ukunxiba kwemihla ngemihla kunye neenyembezi zokuhlambela eziphambili ngaphakathi kunye neendawo zokuhlambela kwindlu yeephuli okanye ivenkile engaphandle.
Ukuba ufuna ukulungisa kwakhona okanye ukuyila indawo yakho yangasese yangasese usebenzisa i-quartz ungasebenzisa Isoftware yoyilo lwendlu yangasese Inkqubo yokunceda ukubona imibono yakho.
ukuba ngumthengisi kwiqhina
Fibreglass kunye neAcrylic - Iishawari ezininzi, ngakumbi kumakhaya amatsha akhiwe ngezinto ezisemgangathweni, zigqunywe ngeglasi yeglasi okanye i-acrylic. Rhoqo iindonga zeshawari zinodonga olunye oluyimbumba ye-fiberglass ebunjiweyo ukuze ilingane ngaphakathi kweshawari.
Ezi fiberglass okanye iindonga zeshawa ze-acrylic lukhetho olufanelekileyo lokugcina amanzi kwaye ujonge kwaye usebenze ngcono kuneendonga ezinemigangatho. Azixabisi kakhulu kodwa zithande ukukrwela kunye nokubuna.
Uphawu oludumileyo yi- Ishawa yeCorian eza ngemibala eyahlukeneyo kwaye inokulinganisa ukubonakala kwelitye lendalo.
Ithayile - Umgangatho weendonga ezininzi zeshawari kule minyaka ibandakanya iithayile. Nangona iithayile ezintle kunye neepateni zinomtsalane kakhulu, ithuba lokuvuza kunye nokusilela kwe-grout kunokuthetha ukugcinwa okuninzi. Bona Okuninzi Izimvo zethayile yangasese Apha.
Ilitye -Iitayile zamatye zihle, kodwa ilitye lendalo lihlala lingena kwaye lifunxa intsalela yamanzi nesepha. Ezi tile kufuneka zicocwe kakuhle kwaye zitywinwe rhoqo. Iithayile zegranite okanye a I-marble shower zibiza kakhulu kwaye zithande ukuqhekeka.
Ngezinto ezininzi onokukhetha kuzo zokugubungela udonga lokuhlamba, i-quartz ibonelela ngendlela efanelekileyo enika ukhuselo kumonakalo wamanzi, ivumela iindlela ezintle zoyilo, kunye nokugcinwa okuncinci. Iindonga zokuhlamba ezigutyungelwe ngamatye e-quartz zizinto ezintle nezomeleleyo kuyo nayiphi na indlu yangasese.
Ukufumana ezinye zoyilo ezinxulumene noko ndwendwela inqaku lethu ku Izimvo zeshawa yokuhambahamba .
ilokhwe yomtshakazi emnyama nesilivere
igumbi lamakhwenkwe namantombazana
ungalitshintsha njani igama lakho kwi-texas